Ulwelwesi Olomile eNyakatho Ntshonalanga
Real Estate Listings: » Business Directory » Home Improvement Contractors » Ulwelwesi Olomile eNyakatho Ntshonalanga1
Ikhodi Yokuposa: WN4 9TY
I-Dry Lining North West ingumhlinzeki wezinsizakalo oyingcweti wezinsizakalo zokwakha udonga olomile endaweni yaseWigan. Njengoba sinolwazi lweminyaka engama-25 lokuletha izinsizakalo zokufaka udonga olomile lwe-premium kanye nephothifoliyo yamakhasimende enabadlali bemikhakha yokwakha abalulekile sihlala sisesimweni esivumayo ukubhekelela zonke izidingo zakho zokufakwa odongeni olomile. Eminye yemisebenzi esiyinikezayo ifaka phakathi: I-Metal Stud Partitions Laminated Partitions Tape & Jointing Suspended Ceilings Screw Fix Ceilings Coving Plastering Plaster Skim Finish Sitholakala kalula ukubhekana nemisebenzi yanoma iluphi usayizi kusuka emisebenzini yokwakha emincane kuya ezinkontilekeni ezinkulu zezentengiselwano. Kuzo zonke izimo sinikeza uchwepheshe, insizakalo esezingeni eliphezulu ngamanani wokuncintisana. Ngakho-ke, noma ngabe yini odinga ulwelwesi lwakho olomile xhumana ne-Dry Lining North West namuhla ukuthola kabanzi. Inhloso yethu ukufeza futhi weqe okulindele. Sinolwazi ku: Dry Lining Systems, Metal Stud Partitions, Wall Linings, Taping and Jointing, Suspended Ceiling Systems. Sine inethiwekhi lonke liners abanolwazi owomile, ophahleni installers, joint kanye plasters ukuhlangabezana nezidingo zakho. Sineqembu elisebenza kahle nelisebenza ngomakhalekhukhwini ukuxhumanisa imisebenzi yethu yangaphakathi nangaphandle kwesayithi, okusenza sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene ngokwanele ukwanelisa isikhathi esinqunyelwe inkontileka yakho, nokuqinisekisa ikhwalithi yokufakwa kwethu. Ubungcweti bethu emisebenzini yokuhlukanisa imizila esheshayo nokwenza uphahla kusenze sathandwa kakhulu ngosonkontileka abancane kuwo wonke amakhasimende ethu amanje, nge-80% yenzuzo yethu yamanje eyenziwe njengenhlangano ephindayo. Sihlala sizama njalo ukuthola amakhasimende amasha, futhi silindele ukuthola imibuzo yakho.